Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu la hadlay carruurtiisii ​​loogu yeedhay. Maxaabiista »
11 Haddii aad ku aragto naag qurux badan oo ka mid ah maxaabiista oo aad ku jeclaatid iyada oo aad rabto inaad naag u guursatid.
12 Waxaad ku soo geli doontaa gurigaaga, oo madaxa way xiirtaa oo ciddiyahana waad gooysaa.
13 Oo waxay iska bixin doontaa dharkeedii ay xidhatay iyadoo maxaabiis ah, Oo waxay joogi doontaa gurigaaga, oo muddo bil ah ayay aabbeheed iyo hooyadeed u ooyaysaa, oo taas dabadeedna waad u tegi doontaa iyada, oo waxaad noqon doontaa ninkeedii, oo iyana waxay kuu noqon doonaan meeshaadii.
14 Haddii ay dhacdo inay ku joojiso, dib ayaad ugu soo diri doontaa, bilaash de qofkiisa, oo kama iibin kartid lacag; Uma aad macaamiloon doontid sida addoon oo kale markii aad naag guursatid ka dib.
Oo Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu kugu amrayaa Yuhuudda inay sameeyaan - Markaan kuu sheegno in Eebbe yahay qorshe Ilaah iyo damiir !
Oct01 01: 43